कांग्रेस सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्दैनः डा. महत | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home राजनीति कांग्रेस सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्दैनः डा. महत
काठमाडौ, १९ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले नेपाली कांग्रेस सरकार परिवतर्नको खेलमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको खेलमा छैन । मुलुकमा अस्थिरता धेरै भयो । बारम्बार सरकार परिवर्तन गर्दा मुलुक अस्थिरतामा जान्छ । त्यसैले अहिले हामी यो खेलमा लाग्दैनौ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा डा. महतले यो सरकार बदलिए सत्तारुढ गठबन्धन विचको आन्तरिक विरोधाभाषले नै बदलिने दावी गर्दै मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने गरी सरकार परिवर्तनको खेलमा आफूहरु नभएको बताए । यद्यपि उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए ठिकै भएपनि त्यो मात्रै एउटा विकल्प भने नभएको दावी गरे ।